किन पर्छ टाउकोमा जुम्रा ? यस्ता छन् जुम्रा हटाउने सजिलो उपाय - ज्ञानविज्ञान
धेरैजसो लामो र बाक्लो कपाल भएको महिलाहरुको टाउकोमा वा जिउमा समेत जुम्रा पर्ने गर्दछ । छोटो कपाल भएको कारणले गर्दा पुरुषहरुमा तेस्तो खासै जुम्रा पर्ने देखिदैन । तर, फोहोर वातावरण, अव्यवस्थित जिवानसैली, वा कसैको टाउकोबाट सरेको खण्डमा जुम्रा सबैलाई पर्न सक्छ । अहिले बजारमा पाइने विभिन्न केमिकल भएको श्याम्पू, तेल र कन्डिसनरका कारण सहरका मानिसहरुलाई खासै जुम्रा परेको देखिदैन ।
अझै पनि नेपालको धेरै जसो ग्रामिण क्षेत्रमा धेरै व्यक्तिहरु कुनै न कुनै समयमा जुम्राबाट पिडीत भएको देख्न सकिन्छ । हामीलाई प्राय बच्चा बेलामा जुम्राले सताएको देख्ने गर्दछौँ । तर, सजिलै एकबाट अरूमा सर्ने भएको कारणले बच्चाहरुबाट सरेर ठुला मानिसहरुलाई समेत जुम्रा पर्न सक्छ । जुम्रालाई बाँच्नको लागि मानव शरीरको रगत चाहिने हुन्छ । जुन तिनीहरुले मानिसको टाउकोबाट चुसेर पाउँने गर्छन् । मानव शरीरबाट जुम्रा बाहिर निस्केमा जुम्रा ४८ घण्टा भित्र मर्ने गर्छ ।
पोथी जुम्राले हरेक दिन १० वटा लिखा पार्ने गर्छे भने उक्त लिखाबाट ८ देखि ९ दिन सम्ममा जुम्रा निस्कन थाल्छ । जुम्रा पर्दा हाम्रो टाउको निकै चिलाउने गर्छ । जुम्रामा पखेटा नहुने कारणले उनीहरु छिटो हिड्न, घस्रिन र रगत चुस्नका लागि निकालेको र्याल ले गर्दा हाम्रो टाउको चिलाउने गर्दछ । टाउकोमा पर्ने जुम्राले कुनै रोग लगाउदैनन् । तर, लामो कपालको तल तल आएको लिखाले हाम्रो छालामा संक्रमण गरेर असर पुर्याउने गर्छ ।
जुम्राले टोकेर धेरै चिलाएको ठाउँमा पनि कपाल गाँठो पर्ने, घाउ हुने, गनाउने जस्ता छालामा संक्रमण हुन सक्छ । आजकल मानिसको कपालमा परेको जुम्राबाट छुटकारा पाउने औषधिहरु सजिलै बजारमा पाइने गर्छन् । उक्तऔषधिलाई कपालमा सुक्खा भएको बेलामा लगाउँदा धेरै फाइदा गर्छ । कपालमा औषधि लगाएपछि आधा घन्टा सुकाएर नुहाउदा जुम्रा नष्ट हुने गर्छ ।
एक प्रकारको गमले टासिने भएको कारणले औषधिको प्रयोग भए पनि लिखा नुहाएर जाँदैन । बाँसको काँइयो वा हातकै माध्यमले लिखा फाल्नुपर्ने हुन्छ । परिवारमा एकजनालाई जुम्रा परेको छ भने अन्यलाई पनि सर्न सक्ने भएकोले एकै दिन सम्पूर्ण परिवारले उपचार गर्दा राम्रो हुन्छ । मानिसको शरीरमा पर्ने जुम्रा भने फोहोर भएको वा लामो समयसम्म एउटै कपडा प्रयोग गर्दा पर्न सक्छ । लुगा भन्दा बाहिर जुम्रा नबस्ने भएका कारण संक्रमितले आफूले नियमित रुपमा नुहाएर सफा लुगा लगाउने गर्नु पर्छ ।
जुम्रा पर्ने कारण र हटाउने तरिका :
तपाइले आफ्नो टाउकोमा जुम्रा परेको अनुभव गर्नु भएको छ । छैन भने ठिकै भयो यदि छ भने तत्काल व्यवस्थापन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।नेपालका ग्रामिण क्षेत्रमा अहिलेपनि धेरै व्यक्ति कुनै न कुनै समयमा जुम्राबाट पिडीत भएको देखिन्छ । प्राय बच्चा बेलामा जुम्राले सताएको देख्ने गर्दछौँ । कसैकसैलाई बयस्क र बृद्ध बेलामा समेत जुम्राले सताउने गरेको पाइन्छ ।
तपाईँले आफ्नो टाउकोमा जुम्रा परेको अनुभव गर्नु भएको छ । छैन भने ठिकै भयो यदि छ भने तत्काल व्यवस्थापन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।नेपालका ग्रामिण क्षेत्रमा अहिलेपनि धेरै व्यक्ति कुनै न कुनै समयमा जुम्राबाट पिडीत भएको देखिन्छ । प्राय बच्चा बेलामा जुम्राले सताएको देख्ने गर्दछौँ । कसैकसैलाई बयस्क र बृद्ध बेलामा समेत जुम्राले सताउने गरेको पाइन्छ ।
आज हामी त्यहि जुम्राबारे केही तथ्य प्रस्तुत गर्दैछौँ :
१. जुम्राहरु पहेँलो, सेतो, कालो, खैरो रङ्गका हुन्छन् जुन चामलको दानाको एक चौथाई आकार भन्दा पनि साना हुन्छन् ।
२. जुम्राहरु टाउको टाउकोको सम्पर्कबाट एक ब्यक्तिबाट अर्को ब्यक्तिमा सर्ने गर्र्छन् ।
३. जुम्रालाई बाँच्नको लागि मानव शरीरको रगत चाहिन्छ जुन तिनीहरुले टाउकोबाट चुसेर पाउँछन् । मानव शरीर बाहिर जुम्रा ४८ घण्टाभित्र मर्छन् ।
४. जुम्राको अण्डा अर्थात लिखाबाट जुम्रा निस्कन करिब ८ देखि ९ दिन लाग्छ ।
५. टाउको अत्यधिक जुम्रा पर्दा जुम्राले निकालेको सलाइभा (र्याल) ले गर्दा टाउको चिलाउने गर्दछ ।
६. मानव शरीरमा रहने जुम्राहरु जनावरहरुमा पर्दैन ।
७. जुम्रामा पखेटा हुदैन, त्यसैे तिनीहरु उड्न तथा उफ्रिन सक्दैनन् । तर तिनीहरु छिटो हिड्न, घस्रिन सक्छन् ।
८. पोथी जुम्राले हरेक दिन १० वटा अण्डा अर्थात लिखा पार्ने गर्छे ।
९. छोटो कपाल भएका कारण महिलामा भन्दा पुरुषमा जुम्रा पर्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
१०. झट्ट हेर्दा जुम्राका अण्डा अर्थात लिखा चाँयाजस्तै रौमा झुण्डिएको जस्तो देखिन्छ तर त्यो होइन लिखा कपालमा रहेको गमजस्तो पदार्थले बेस्सरी टाँसिरएर बसेका हुन्छन् ।
११. टाउकोमा पर्ने जुम्राले कुनै रोग लगाउदैन ।
जुम्रा पर्ने कारण :
मानिसको शरीरमा तीन प्रकारको जुम्रा पर्ने गर्छ । कपाल, जिउ तथा गुप्तांगमा फरक फरक प्रकारका जुम्रा पर्छ । मानिसले जुम्रा परेपछि जिउ तथा टाउको चिलाएर अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी, महिलाको कपाल लामो र बाक्लो हुने कारण जुम्राको समस्या धेरै हुन सक्छ ।
बाक्लो कपालमा बस्न मन पराउने जुम्राले विशेष कन्पारा, गर्दनको साइडमा असर पुर्‍याउन सक्छ । जुम्राले टोकेर धेरै चिलाएमा या कन्याउँदा छालामा संक्रमण हुन सक्छ । जसले गर्दा कपाल गाँठो पर्ने, घाउ हुने तथा गनाउने समस्या हुन सक्छ । लिखा कपालको जरामा टाँसिएको छ भने संक्रमण भएको मान्नुपर्छ ।
कपालको तल–तल आएको लिखा पुरानो संक्रमण हो । यसले छालालाई बढी असर पुर्‍याउन सक्छ ।
मानिसको कपालमा परेको जुम्राबाट छुटकारा पाउने औषधि बजारमा पाइन्छ । सो औषधिलाई साप्ताहिक रूपमा कपालमा लगाउँदा धेरै फाइदा गर्छ ।
कपालमा जुम्राको औषधि सुक्खा भएको वेला लगाउनुपर्छ । कपालमा औषधि लगाएपछि आधा घन्टा सुकाएर नुहाएको खण्डमा जुम्रा नष्ट हुन्छ । सामान्यतया केटीहरूको कपाल लामो र केटाहरूको छोटो हुन्छ । त्यसैले केटीहरूलाई जुम्राले बढी सताउने गरेको पाइन्छ ।
जुम्रा एक प्रकारको परजीवी हो, जो सजिलै एकबाट अरूमा सर्छ ।
परिवारमा कसैलाई जुम्रा परेको छ भने अन्यलाई पनि सर्न सक्छ । त्यसैले एकै दिन सम्पूर्ण परिवारले उपचार गर्नु राम्रो हुन्छ । औषधिको प्रयोगले जुम्रा नष्ट भए पनि लिखा नुहाएर जाँदैन । त्यसैले बाँसको काँइयो या हातकै माध्यमले फाल्नुपर्ने हुन्छ ।
मानिसको शरीरमा भने नियमित रूपमा लामो समय एउटै कपडा प्रयोग गर्दा जुम्रा पर्न सक्छ । लुगाभन्दा बाहिर जुम्रा नबस्ने भएका कारण संक्रमितले आफूले लगाएको लुगा नै फाल्नु उपयुक्त मानिन्छ ।
जुम्रा बारे ११ रोचक तथ्यहरु :
नोट: माथि उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरु विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो । मानिसको शारिरिक अवस्था र समय अनुसार पनि माथि उल्लेखित कुराहरुको उपलब्धी फरक पर्छ । सम्पुर्णरुपमा यहि कुरामा मात्रै भर नपर्नुहोला । माथि उल्लेखित कुराहरु प्रयोग गर्दा तपाईकोस्वास्थ्यमा थप खराबी देखिए, कृपया तुरुन्त रोकेर स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सल्लाह लिनुहोस् ।
Don't Miss it के तपाईलाई पेटभरी खादा पनि छिट्टै भोक लाग्छ ? किन ? जान्नुहोस्
Up Next किन निन्द्रा पुग्नेगरी सुत्दा पनि थकान लाग्ने गर्छ ? एक पटक पढ्नुहोस्
सफल जीवनका लागी सधगुरुका महत्वपूर्ण सुझावहरु
जग्गी वासुदेव सधगुरुको नामले प्रसिद्द छन् । भारतीय आध्यात्मिक गुरु तथा लेखक सधगुरुको जन्म ३ सेप्टेम्बर १९५७ मा भएको थियो…